Ndị na-ahazi mgbidi kacha mma maka ụlọ gị - Ulo
Ndị na-ahazi mgbidi a dị ka akwụkwọ akụkọ Bullet maka Yourlọ Gị
These Wall Organizers Are Like Bullet Journals
Nkwupụta TPS, imirikiti ụbọchị ọmụmụ nke afọ 6, na-ebi ndụ-tweeting the Grammys for your 79 followers… Enwere ọtụtụ ihe na efere gị nke ị kwesịrị icheta na oge ụfọdụ kalenda kalenda na ngwa ndetu na ekwentị gị anaghị egbutu ya. Ma c'mon, ebee ka ị ga-agbazinye oge iji malite akwụkwọ akụkọ mara mma? Chọrọ ebe etiti iwu zuru oke. Otu nke dị mfe iji, na-ahapụ gị ka ị hụ ihe niile ịchọrọ ime na nlele ma na-echekwa ihe n'ihu (ebe ọ bụ na ị na-agabiga ya mgbe niile). Nke ahụ bụ ebe ndị na-ahazi mgbidi a batara. Ha ga - enyere gị aka idobe ndụ gị n'usoro, ma ha dị mma nke na ị gaghị eche banyere inwe ha na ngosi.
Njikọ: Oghere Kitchen 4-Inch You Na-eleghara Anya Ma Kwesịrị Iji Ya Maka Nchekwa
1. Kasị mma maka obere oghere: Kaira Wood Entryway nhazi
Hapụ ya na West Elm iji weta usoro nzukọ maka ụdị A nke na-eche na ọ zuru ike. Ogwe na-ehichapụ akọrọ na-atụkwasị na mgbidi ahụ n'elu okporo ígwè 36-inch, nke nwere nko iji debe igodo gị, ipigide na uwe mkpuchi mgbe niile na ogwe aka nke ịpụ n'ọnụ ụzọ. Enwere enyo maka anya ikpeazụ ọ bụla, nkata koro achịkọta iji kpokọta ndị niile Kupọns ndị na-adọrọ mmasị gị na Valpak na-eziga gị na ọbụlagodi magnet maka ụdị ikike ụlọ akwụkwọ ị na-agaghị echezọ ịbanye.
B ITTA ya ($499$ 250)
2. Kachasị mma maka ụdị okike: Kaforise ese Waya Wall Grid Panels
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka usoro nzukọ gị bụrụ nke anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla — ọ ga-erikwa nri abalị maka mmadụ abụọ na Chipotle - lee anya n’ihu. Ngwa a na-enye gị ihe ntanetị abụọ na kposara iji kpọgidere ha na mgbidi gị. Site n'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta ole na ole akwa akwa na shelf shelf s iji chepụta nhazi iji kwado mkpa gị.
PB Afọ Iri na .ma
3. Kachasị mma maka ndị pere mpe: Usoro Ọmụmụ Osisi
Ka anyị chee ya ihu: Otu mpempe akwụkwọ ndị dị na mgbidi gị, na-echetara gị ihe niile ịchọrọ ime, nwere ike ịbụ nrụgide. Na tụkọtara-y. Maka uzo ozo di nma na nke Zen (nke ahu adighi etinye nkpu oku gi nke ndu na ngosiputa zuru oke nye onye obula nke ghafere uzo ntinye gi), gaa maka usoro ihe omumu osisi nke Pottery Barn Teen. Otu akpa miri emi na-eme ka mpempe akwụkwọ na-enweghị ike iru na-enweghị ihu gị, ụyọkọ ụcha ọcha na-acha na-acha odo odo na-agakọ na mgbidi na-anọpụ iche. Nanị nsogbu ị ga - enwe bụ ijide akara ahụ.
Zụta ya ($ 79)
4. Nke kacha mma maka ndi n’ebum n’obi ha: 1Thrive
Maara na onye nhazi bụ ngwaahịa na-ekpo ọkụ mgbe ị nwere ike ịhazi ya. Nke ahụ bụ n'ihi na e mere akara ahụ site na otu ndị na-akọwa onwe ha ndị na-eme atụmatụ na ndị nne na nna na-arụsi ọrụ ike, ha niile nwere ebumnuche nke inyere ndị mmadụ aka ịchụso na imezu ebumnuche ha. Chee maka mkpokọta ahụ dịka bọọdụ ọhụụ na-eme ihe, wepu mkpokọta. Companylọ ọrụ ahụ na-enye usoro asaa nke ebe a na-enye iwu, dabere na mkpa gị, mana anyị na-ele mmadụ anya n'ihu na Susan-ụda osisi na-ekpo ọkụ, ụda ojii na ọla edo na-aga n'ihu. Nke ka mkpa, sistemu a nwere ike igbochi ihe niile site na ịhazi ozi na ịhazi nri ka ịdebe obere akwụkwọ Roberta's 18 extracurriculars na 2044 onye isi ala na-agba ọsọ.
Zụta ya ($ 149$ 129)
5. Kachasị mma maka 'Fixer Upper' Fans: MyGift Rustic Wall Organizer
’Re bụcha ihe gbasara Joanna Gaines anya ụlọ ụlọ oge a, mana ịnweghị oge iji gaa oge ochie maka mpempe akwụkwọ vaịn zuru oke nke ị nwere ike iji ịhụnanya weghachite-ma ọ bụ nsogbu-karịa ọtụtụ ngwụsị izu. Anyị na-enweta ya. Mafere ọrụ ụkwụ wee họrọ akwụkwọ mpempe akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ochie a.
6. Kachasị mma maka ndị na-achụso Momagers: Chalkboard Command Center
Ọ bụrụ na ị na-agbagharị ọtụtụ ọrụ (na usoro ihe omume ụmụaka) karịa Kris Jenner, ịchọrọ ịchọta Etsy a. Kalinda a buru ibu buru ibu buru ibu na-enye gị ohere ịhazi ihe dị ka ụbọchị 60 tupu oge eruo, yana ngalaba ebe ị nwere ike ịdebanye (jiri nlezianya kpọọ) ndetu, hazie nri abalị nri izu ma depụta ihe ị ga-eme na nri ịzụrụ.
Zụta ya ($ 55)
7. Kachasị mma maka ezinụlọ nke oge a: Kalịnda Acryli kpọrọ nkụ
Mgbe ụfọdụ ị chọrọ naanị ihe mara mma, dị mfe ma mod. Chọghị nko nchekwa ma ọ bụ ụdị nhazi ozi; naanị ị chọrọ ka ọ dị mma iji cheta mgbe nkuzi igwu mmiri ọzọ ma ọ bụ nleta MIL bụ. Kalenda acrylic a bu ihe gbamgbam nke oma na isi igbusi, ma enwere ike hazie aha ezinulo gi n’elu elu, ya na ihe nghota nke ọla ọcha, ọla edo ma obu matte. Na mgbakwunye, akụkụ ọ bụla na kalenda ahụ dị sentimita atọ na sentimita atọ, nke pụtara na ị ga-enwe ohere zuru oke iji jotụ ihe agbagọ.
Zụta ya ($ 135)
Njikọ: Ihe mbu ndi n’etu ulo n’ahu mgbe ha batara n’ulo gi
sinima na netflix
leo ndakọrịta na leo
Atụmatụ iji belata ntutu ịda n'ụlọ
esi kwụsị ntutu na-ada kpamkpam
arụrụ n'ụlọ mara mma maka ileke ihu